musha Oceania Ruby Rose Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ruby Rose Childhood Biography Nyaya
Yedu Ruby Rose Biography inokupa iwe nhoroondo yeUdiki hwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Rudo Hupenyu (musikana), Mararamiro, uye Hupenyu Hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokushongedzera neongororo yakazara yeHupenyu Hwake Nhoroondo kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Chokwadi chinotaurirwa, mukutsvaka kwake stardom, mukurumbira weAustralia apfuura nemhando dzakasiyana dzemiedzo. Nekudaro, vashoma chete vevateveri vake vane ruzivo rwakazara rweRuby Rose Biography. Nekudaro, isu takaisa pamwechete yakapfupika Hupenyu Hupenyu uye pasina yakawanda ado, ngatitangei.
Ruby Rose Nyaya Yemwana:
Kune ekutanga bio, iyo modhi ine zita rechitatu- Langenheim. Ruby Rose akazvarwa musi we 20th waMarch 1986 muMelbourne, Australia.
Akauya pasi pano kuburikidza naamai vake, Katia Langenheim, uye nababa vake, avo vanozivikanwa zvishoma nezvake. Ruby Rose vabereki - mumubatanidzwa wavo wakabudirira- vakaita kuti ave iye ega mwana.
Unoziva here?… WekuAustralia modhi, mutambi uye mutepfenyuri weterevhizheni akarerwa naamai vake vasina murume vakasiya baba vaRuby aine makore maviri.
Nekudaro, Rose akapedza mazuva ake eUdiki achiyemura hunhu hwaamai vake. Zvingave zvine musoro kufunga kuti rudo rwake rwekuita rungave rwakakonzerwa nebasa raamai vake rinoshamisa.
Ruby Rose Mhuri Dzinotangira: Kudzinza kweMurume Akashinga Masoja:
Kunyangwe pasina ruzivo nezve baba vake, chimwe chinhu chatinogona kushandisa kutsvaga kwake midzi. Mhuri yaRuby Rose yaanogona kungoteedzerwa kuburikidza nenhaka yaamai. Nekudaro, iye ndeweAustralia weChirungu, weScotland, wechiGerman, uye wekuIreland.
Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro pemhuri yake Ruby Rose mhuri ndeyekuti sekuru vake sekuru Alec Campbell, ndiye akapedzisira kupona musoja wekuAustralia muhondo yeGallipoli panguva yeHondo Yekutanga yenyika.
Ruby Rose Mhuri Yemhuri:
Kunyangwe mukurumbira weramangwana akazvarwa mumhuri yepakati-kati, amai vake vakaita nhamburiko dzekumupa izvo zvaanoda.
Avhareji chinzvimbo Mhuri yaRuby Rose uye basa raamai vake ndicho chimwe chezvisarudzo zvakakura zvemuenzaniso wake nekuita basa. Chikonzero kuve chekuti akashandisa huzhinji hwehupenyu hwake hwepakutanga achitarisa uye achidzidza kubva kuna amai vake zvekuyedza.
Ruby Rose Upenyu Hwekutanga Nyaya - Sarudzo pakati peHupenyu neRufu:
Wedu wekuAustralia muenzaniso uye mutambi akapfuura nenzira inoshungurudza muhuduku hwake makore. Zvinosiririsa kuti akabatwa bonde neumwe wehama dzake achiri musikana mudiki. Sezvo isu tese tinoziva, zviitiko zvinotyisa zvakadaro ndizvo zvinokonzeresa kushungurudzika uye kurwadziwa.
Varombo Ruby akatadza kutakura mutoro wechiitiko chose uye akaedza kutora hupenyu hwake mushure.
Zvisinei, kuedza kwake kuzviuraya hakuna kubudirira. Kunyangwe zvakadaro, iyo nhamo yese yakava chigadziro chebonde rake - Lesbian.
Ruby Rose Dzidzo:
Pakazosvika nguva yemangwana yeAustralia modhi yaive nemakore gumi nemaviri, aive azivisa pachena kuti aive ngochani.
Mhedzisiro yekuzivisa kwake yaive isingafadzi sezvo vamwe vana vechikoro chake vaigara vachimunetsa nekuda kwezvaanoda pabonde.
Paaidzidza paUniversity High School, Ruby Rose akashungurudzwa kusvika pakumuisa muchipatara.
Nekudaro, aifanira kusiya chikoro ndokunyoresa kuFootscray City College, kwaakapedza zvidzidzo zvake.
Ruby Rose Pakutanga Yehupenyu Hupenyu:
Mugore ra2002, chaipo inguva iyo yaakarapwa muchikoro chepamusoro, Red akatsvaga kutora chikamu mu "Musikana Shamwari Model Kutsvaga”Makwikwi. Makwikwi aya akarongwa na "Musikana ” yaive magazini yekuAustralia.
Mumakwikwi aya, rombo rakanaka Ruby akazviisa pachikwata chevakapedzisa uye akapedza wechipiri, kumashure kwaCatherine McNeil. Kubudirira uku ndiko kwaive kutanga kwehunyanzvi hwekuenzanisira basa. Akakomborerwa sei anofanira kunge akanzwa panguva ino yekuchinja kwehupenyu hwake.
Ruby Rose Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Makore mashoma ekuteedzera akatungamira kune inoenderana nzara yekugona. Pane imwe nguva, akafunga kumisikidza kuyedza kwake kubva mufashoni kuenda kune yaanofarira basa muVJ - Vhidhiyo Jockey.
Netariro huru, Ruby Rose akashanda nesimba mukutsvaga basa reMTV VJ muAustralia. Patsamba iyi, akakwikwidza zvakanyanya kupokana nevamwe 2000 vamwe vanhu vaitsvaga basa rimwe chete.
Chokwadi chinotaurirwa, hapana chakanaka chinouya nyore. Nekudaro, mutambi wedu wechigamba aive asina imwe sarudzo pane yekufamba neshungu uye zvisati zvamboitika mukati memavhiki matatu ekuvhima basa kwenyika.
Unoziva?… Sechikamu chemakwikwi, modhi iri kuuya yakarova zvishoma pasi pezana pfuti dzehwahwa mukati maminetsi zana uye ikatsvoda vausingazive mumugwagwa wakabatikana muSydney.
Ruby Rose Bio - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Pakupedzisira, kuyedza kwaRuby kumakwikwi evhiki nhatu hakuna kuraswa sezvo iye akapihwa basa pakupera kwekuratidzira. Naizvozvo, akazove iyo VJ yeMTV Australia kusvika gore ra2011.
Ndichiri kushanda neMTV Australia, Ruby akave nerombo rekuhwina mubairo weASRA weFavorite Mukadzi Hunhu mugore ra2009.
Aita chimwe chinogutsa chinogutsa mumitambo yeterevhizheni, Ruby akafunga kumutsidzira kuda kwake kwekuenzanisira. Naizvozvo, akagadzira kamutsipa kefashoni mutsetse pamwe chete neAustralia fashoni chitaridzi - Mukaka uye Uchi.
Nekufamba kwenguva, akarekora budiriro huru nekuratidzira mune akakura emagazini makuru seVogue Australia neCosmopolitan kutaura mashoma.
Unoziva here?… Ruby Rose uye Ed Sheeran akagamuchira 2015 MTV Europe Music Music kuMilan muna Gumiguru 2015.
Mutambi wedu weAustralia akagadzira zita mukurumbira muindasitiri yemamuvhi. Ruby Rose aigara achiisa mabasa makuru mumafirimu akasiyana.
Imwe yeakarumbidzwa kwazvo uye yekuita basa yakaonekwa mune akateedzana- Orange Ndiyo Itsva Black. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ruby Rose Upenyu Hupenyu:
Mukuda kwake kuchengetedza muyero pakati pebasa rake nehupenyu hwehukama, modhi yeAustralia yakabatanidzwa muzvinhu zvinodarika gumi zvakasiyana.
Kunyangwe iye akadanana nevanhu vazhinji, Ruby Rose achiri asina kuroora panguva yekunyora kwake bio.
Kechipiri, haisiriyo nhau yekuti kuita kwake zvepabonde ndewe Lesbian. Uyezve, hukama hwake hwese hunoratidza kuti iye chete ane maziso evakadzi vakanaka.
Kubva paakakwira mukurumbira, Ruby akambodanana naVanessa Amorosi, Lola Van Vorst, Kathryn Gallagher, Jessica Origliasso (2008 - 2018), Lauren Abedini (2012), Demi Lovato (2015), uye Harley Gusman (2016).
Nekudaro, iye anongonzwa kudiwa kwekutora yake yerudo nyaya kune yakazara zvakasiyana nhanho nevashoma vevadi vake. Pakati pemusikana wake, Ruby Rose ave akavimbiswa naLyndsey Anne (2009), Catherine McNeil (2010), uye Phoebe Dahl (2014 - 2015).
Ruby Rose Hupenyu Hwemhuri:
Yemhando yedu yeAustralia yagadzira toni yekuita muhupenyu hwebasa rake, zvese nekuda kwekutsigirwa kwemhuri yake. Pazasi pechikamu chemashoko akapfupika pamusoro penhengo yega yega yeMhuri yake kutanga nevabereki vake.
Nezve Ruby Rose Amai:
Pangadai pasina Ruby munyika yedu nhasi pasina amai vake. Kune zvinyorwa, amai vaRuby Rose ndiKatia Langenheim.
Akasimudza mutambi weAustralia semukadzi mumwe chete. Kutenda nebasa rake rehunyanzvi, Ruby Rose akasarudza kupinda muindasitiri yevaraidzo.
Nezve Ruby Rose Baba uye Vanun'una:
Zvinosuruvarisa kuti Ruby akangopedza makore maviri nababa vake pakuzvarwa kwake. Nekuda kweizvozvo, pakange pasina ruzivo nezve baba vaRuby Rose. Uyezve, modhi yedu inozivikanwa yeAustralia haina hama kana hanzvadzi.
Nezve Ruby Rose Relatives:
Hama dzinonyanya kuzivikanwa ndisekuru nasekuru vake. Ambuya vake amai vake ndiDeirdre Rose Campbell apo sekuru vake amai vaThomas Roland Richard Langenheim.
Uyezve, Panga pasina ruzivo nezve Ruby Rose sekuru kubva kudivi rababa vake pamwe nasekuru vake nasekuru.
Nekuda kwekuti iye haana vakoma kana vanin'ina, tinogona kutaura kuti iyo modhi yeAustralia hainawo chero vazukuru kana vazukuru.
Nezve Ruby Rose Godfather:
Humwe hunhu hwakakosha muhupenyu hwemukurumbira ndiGogo wake, Lionel Edmund Rose. Aive mukurumbira weAustralia muratidziri anodikanwa uye anoremekedzwa nevakawanda vevateveri vake.
Ruby Rose Hupenyu Hwega:
Kutanga uye pamberi pezvese, chiitiko chehucheche chedu akakurumbira eAustralia celeb chakachinja zvakanyanya hunhu hwake. Sezvineiwo, Ruby Rose akamboratidza kuti semusikana mudiki, ainyatsogutsikana kuti akazvarwa kuva mukomana.
se Rihanna uye Justin bieber, Rudy Rose's persona isanganiswa yePisces zodiac maitiro. Iyo nhanho yekuchinjika kune yakashata nharaunda yaakakurira mairi, inokodzera yake horoscope. Munguva pfupi yapfuura, haasati ataura zvido zvake nekuzvivaraira kuruzhinji.
Ruby Rose Mararamiro:
Kuedza kweedu wekare weAustralia modhi kwakaunza kudzoka kukuru kwemari nekufamba kwenguva. Panguva yekunyora bio raRuby, yake Net Kukosha yaifungidzirwa kunge ingangoita mamirioni maviri emadhora. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pakuita kwake modelling nekuita basa.
Chimwe chinhu chakanaka pamusoro paRuby Rose ndechekuti anochengeta chimiro chakaderera paunenge uchirarama yakasarudzika Mararamiro. Kunyangwe iye aine motokari dzinoverengeka dzinodhura uye imba yepamusoro, Ruby haagari achitutira zvinhu zvake online.
Ruby Rose Chokwadi:
Kuputira yedu Ruby Rose Life Story, heano zvimwe zvishoma-anozivikanwa chokwadi chingakubatsira iwe kunzwisisa Biography yake zvakakwana.
Chokwadi # 1: Matipi:
Unoziva here?… Ruby Rose anyora anodarika makumi matatu nematatu mairi mumuviri wake. Aive aine izwi rekuti "HUPENYU" rakamonyorwa paruoko rwake rweruboshwe pakati peainyorwa anokosha pamuviri wake.
Chokwadi # 2: Ruby Rose's Filmography neVin Diesel:
Wedu veteran mutambi akaratidzira mumafirimu akawanda-anopisa mafirimu. Akaonekana saAdele mhumhi mukati XXX Kudzoka kweXander Cage kwaakabata pamwe nemutambi wemitambo weAmerica Vin Diesel.
Chokwadi # 3: Anoda Zvipfuwo uye Anomiririra Mhuka:
Yedu inozivikanwa yeAustralia celeb inhengo yePeta pamwe nekutsigira kodzero dzevanhu nemhuka.
Ane zvipfuyo zvitatu zvinosanganisira imbwa mbiri dzinonzi Ru naDaisy pamwe nekatsi imwe inonzi Cricket. Ruby Rose anoda chipfuwo chake zvakanyanya uye kazhinji anotora mufananidzo navo.
Ruby Rose Biography Pfupiso:
Pazasi pane vhiki yezivo base yemuenzaniso weAustralia uye mutambi. Iyo tafura ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi;
Nick Zita: Ruby Rose
Zuva rekuzvarwa: Ya20 Chivabvu 1986
Nzvimbo yekuzvarirwa: Melbourne, Australia
Vabereki: Katia Langenheim (amai)
Hama: Deirdre Rose Campbell naThomas Roland Richard Langenheim (vanasekuru Sekuru)
Kureba mita: 1.7 M
Kureba tsoka: 5 ′ 7 ″
Weight: Mune Kilograms - 58 kg
Mune maPound - 128 lbs
Basa: Model, Actress, uye Television Presenter
Zvipfuwo: Imbwa mbiri nekati
Kutenda nekuverenga iyo Ruby Rose Yehucheche Nyaya uye kumwe kuparara kweBio yake. Isu takavimba kuti wakanakidzwa nazvo.
Kubva pane iyi yekunyora-kumusoro, isu takadzidza kuti vabereki vaRuby Rose- kunyanya amai vake ndiye akakosha munhu akamupa zvakanakisa zvemakore ake ekutanga. Zvekare, zveRuby Rose zvekuita zvepabonde hazvichisiri zvekupokana paruzhinji.
Kutenda kumhuri uye shamwari dzakamira naye, zvakatora hushingi kuti Ruby apinde muboka uye ave zvaari chaizvo. Kune yeAustralia modhi, Rudo harusi nezve vaviri vaviri vakomana.